चिकित्सकले यसरी हटाए निधारमा पलाएको चार इन्च लामो सिङ्ग - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ चिकित्सकले यसरी हटाए निधारमा पलाएको चार इन्च लामो सिङ्ग
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ असोज ५ गते, ११:३४ मा प्रकाशित
एजेन्सी–भारतीय चिकित्सकहरुले एक व्यक्तिको निधारमा पलाएको चार इन्च लामो सिङ्ग शल्यक्रिया गरेर हटाएका छन् । मध्यप्रदेशको रहिली गाँउका ७४ वर्षीय श्यामलाल यादबको निदारमा पलाएको सिङ्ग निकालिएको हो । सन् २०१४ मा टाउकोमा चोट लागेपछि श्यामलालको खप्परमा एक प्रकारको दुर्लभ सिङ्ग पलाएको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा सिङ्ग बढेर चार इन्च लामो भएको थियो ।
चिकित्सकका अनुसार केराटिन नामक एक प्रकारको प्रोटिनका कारण उनको निधारको माथिल्लो भागमा अस्वभाविक सिङ्ग पलाएको हो । केराटिन नामक तत्व खुट्टाको नङ र मानिसको कपालमा पनि पाईन्छ । विशेषतः बयस्क उमेरमा यस्तो समस्या देखिन्छ ।
श्यामलालको उत्तर प्रदेशको भाग्योदय अस्पतालका चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गरेर सिङ्ग काटिदिएका हुन् । अस्पतालका सर्जन डा. विशाल गजभिएले भने, ‘पाँच वर्षअघि श्यामलालको टाउको चोट लागेको रहेछ, त्यसपछि सो स्थानमा सिङ्ग जस्तो मासु पलाएको रहेछ । ’
सुरुमा आफूलाई खासै नदुखेकोले श्यामलालले स्थानीय नाईकोमा गएर सिङ्ग काटेका रहेछन् । तर, जब सो सिङ्ग झन बढ्न थालेपछि चिन्तित बनेका उनी अस्पताल पुगेका थिए ।
‘केराटिनबाट सिङ्ग बनेको हुनाले यसलाई जीवाणूरहित ब्लेडले काट्न सकिन्छ । तर, यसको वास्तविक अवस्थाको उपचार गर्नु आवश्यक थियो । ’ डा. विशालले भने ।
शल्यक्रियाका क्रममा ती श्यामलाल १० दिन अस्पताल बसे र वायोप्सी अध्ययनपछि सिङ्ग खासै हानिकारक नभएको चिकित्सकले बताएका छन् । यस्तो समस्यालाई सर्जरी, रेडियसन थेरापी र केमोथेरापीबाट उपचार गर्न सकिने चिकित्सकको भनाई छ । सिङ्ग निकालेपछि चिकित्सकहरुले सो ठाँउमा श्यामलाललको शरिरको अन्य भागको छाला काटेर राखिदिएका थिए भने अहिले उनको अवस्था सामान्य छ ।
टाउको सिङ्ग उम्रनुको वास्तविक कारण थाहा हुन सकेको छैन । तर, रेडियसन वा सूर्यको प्रकाशमा लामो समयसम्म एक्सपोज हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । श्यामलालको समस्याको वृस्तित विवरण इन्र्टरनेसनल जर्नल अफ सर्जरीमा पठाइएको छ ।